အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ၊ လူနာများကို အောက်ဆီဂျင်များ အခမဲ့ပေးဝေ - Yangon Media Group
အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ၊ လူနာများကို အောက်ဆီဂျင်များ အခမဲ့ပေးဝေ
သထုံ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈
အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာ သွေးနှင့်အောက်ဆီဂျင်အခမဲ့ကူညီရေးအသင်း (သထုံ)၏ အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်နံနက် ၉ နာရီတွင် မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ လိပ်အင်းရပ်ကွက် သာသနာပန်းကုံးကျောင်းတိုက်လမ်းရှိ အဆိုပါအောက်ဆီဂျင် စက်ရုံရှေ့မဏ္ဍပ်၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီး ဒေါ်စံဝင့်ခိုင်၊ သထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ် မာမာခိုင်နှင့် အဆိုပါအသင်း( သထုံ)ဥက္ကဋ္ဌဦးဥာဏ်ထွန်းတို့က အမှာစကားပြောကြားကြပြီး အလှူရှင်များကိုယ်စားဒေါ်မိုးမိုးခိုင်က ဝမ်း မြောက်စကားပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍အခမဲ့ကူညီရေးအသင်းသို့ အလှူရှင်များက အလှူ ငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းကြပြီး အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံအား တာဝန်ရှိသူများက ဖဲကြိုး ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြကာ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်စံဝင့်ခိုင်က အောက်ဆီဂျင် စက်ရုံဆိုင်းဘုတ်အား စက်ခလုတ်နှိပ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံကို အလှူရှင်များ၏စု ပေါင်းလှူဒါန်းငွေ ငွေကျပ်သိန်း ၁၃ဝဝ ကျော်ဖြင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇွန် ၁၈ ရက်က စတင်တည် ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ပထမဆုံးတည်ဆောက် သော အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံဖြစ်ကာ သထုံခရိုင်အတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်သည့် လူနာများအား အောက်ဆီဂျင်များ အခမဲ့ပေးဝေနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်တည် ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”စက်ရုံဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် အလှူရှင်တွေရော အလှူခံကြော် ငြာစာတန်းထိုးပေးတဲ့ ရွှေသံလွင်စကိုင်းနက်ရုပ်သံကိုရော ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါအသင်း(သထုံ) ဥက္ကဋ္ဌဦးÓဏ်ထွန်း ကပြောသည်။ အဆိုပါအသင်းကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် အမှုဆောင် ၂၆ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပြီး အမှုဆောင်များ၏ မတည်ငွေ ကျပ်သိန်း ၂ဝ ဖြင့် သထုံခရိုင်ဆေးရုံ ကြီးတွင် အောက်ဆီဂျင်ဆယ်လီတာဝင်အိုးအလုံး ၂ဝ ကို စတင် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ပပျောက်ရေးနှင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများအား သေဒဏ်ချမှတ်ပေးရေး မတ္တရာမြို့ခံ ၇
မန္တလေးမြို့သစ် (၄) ရပ်ကွက်တွင် ပန်ကာကွိုင် အပူလွန်ကဲရာမှ နေအိမ်လေးလုံး မီးလောင် ဆုံးရှုံး၊ေ??
အဆိုတော်ကြီး အယ်လ်တန်ဂျွန် ဂီတခရီး ဖျော်ဖြေမှုများ ရပ်နားတော့မည်
နည်းပြအဖြစ်သာမက လက်ရှိရာထူးကပါ ဟီယာရိုနုတ်ထွက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၏ ပထမဆုံး လူထုအပန်းဖြေ ဥယျာဉ်ကို ငွေကျပ် သုံးဘီလီယံ ကုန်ကျခံ တည်ဆော?
ရေကြီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကျိုက်မရောမြို့၌် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေဟုဆို